စကား စစ်ထိုးမှုများနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ချယ်ဆီး - မန်ယူ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် | ဧရာဝတီ
ဆောင်းဦးလင်း| October 29, 2012 | Hits:6,725
5 | | ဒိုင်လူကြီး မာ့ခ်ကလက်တန်ဘတ် ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ဆုံးဖြတ်မှုတွေနဲ့ အတူ ပွဲအပြီးမှာ နှစ်ဖက်အသင်း ပရိသတ်တွေကြား အငြင်းအခုံတွေ ဆူညံလို့ နေပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၉) ကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် ဆက်လက်ကျင်းပရာမှာ အသင်းကြီးတွေထဲက အာဆင်နယ်က နောက်ကျဂိုးနဲ့ နိုင်ပွဲ ပြန်ရခဲ့သလို၊ လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီး အသင်းကလည်း ဆွမ်ဆီး အသင်းကို အကြိတ်အနယ် ကန်ပြီး အနိုင် ၃ မှတ် ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စူပါဆန်းဒေး ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ အဲဗာတန်နဲ့ လစ်ဗာပူးတို့အကြိတ်အနယ်ကန်ကြတဲ့ ဒါဘီ ပွဲစဉ်မှာ ၂-၂ ဂိုးနဲ့ သရေကျခဲ့ပြီး ပွဲပြီးခါနီး ဆွာရက်စ် ရဲ့ နောက်ကျဂိုးကို ဂိုးမပေးခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်သံတွေဆူညံခဲ့သလို၊ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ဂ်ျ မှာကစားတဲ့ ချယ်ဆီး-မန်ယူတို့ ပွဲစဉ်မှာ ဒိုင်လူကြီး မာ့ခ်ကလက်တန်ဘတ် ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ဆုံးဖြတ်မှုတွေနဲ့ အတူ ပွဲအပြီးမှာ နှစ်ဖက်အသင်း ပရိသတ်တွေကြား အငြင်းအခုံတွေ ဆူညံလို့ နေပါတယ်။
ဒိုင်လူကြီးကြောင့် အရုပ်ဆိုးဆုံးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပွဲ (ချယ်ဆီး ၂ – မန်ယူ ၃)
မန်ယူအသင်းဟာ ယခုပွဲ အနိုင်ကြောင့် လက်ရှိဇယားထိပ်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ချယ်ဆီး အသင်းကို အမှီလိုက်လာပြီး ၁ မှတ်အကွာနဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ဆီး အသင်းကတော့ အိမ်ကွင်း စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ဂ်ျ မှာ မထင်မှတ်ပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရကာ ဇယားထိပ်မှာ ဆက်လက်ဦးဆောင်ဖို့ ရုန်းကန်ရတော့မှာဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီမက်တီယို ရဲ့ ချယ်ဆီး အသင်းမှာ ဂိုး ပီတာချက်။ နောက်တန်း အီဗာနိုဗစ် ၊ ဒေးဗစ်လူးဝစ် ၊ ကာဟေးလ် ၊ ကိုး။ ကွင်းလယ် ရာမီရက်စ်၊ မာတာ၊ အော်စကာ၊ မီခေးလ်၊ ဟာဇက်။
ရှေ့တန်း တောရက်စ် တို့ နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းရဲ့ နည်းပြ ဖာဂူဆန် ကတော့ အပြောင်းအလဲ တချို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဂိုး ဒီဂီယာ။ နောက်တန်း ရာဖေးလ် ၊ အီဗရာ ၊ ဖာဒီနန်၊ အီဗန်စ်။ ကွင်းလယ် ဗလင်စီယာ၊ ကာရစ်၊ ကလေဗာလေ၊ ယန်း။ ရှေ့တန်း ရွန်းနီ၊ ဗန်ပါစီ တို့ နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး ဘယ်တောင်ပံ ကစားသမား အက်ရှလေယန်းဟာ ၂ လအကြာ ဒဏ်ရာနဲ့ နားနေရာက ပြန်သက်သာလာပြီး ချက်ချင်း ၀င်ကစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲစစခြင်း ချယ်ဆီး အသင်းဟာ အထနှေးခဲ့ပြီး တောင်ပံတွေကနေ ထိုးဖောက်ခံရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မန်ယူအသင်းဟာ တိုက်စစ်မှာ လူချဲကစားပြီး ဗန်ပါစီ ၊ ရွန်းနီ နဲ့ အက်ရှလေ ယန်းတို့ က နေရာစုံ ကစားသွားတာကြောင့် ချယ်ဆီးနောက်တန်း အငိုက်မိပြီး ၄ မိနစ်မှာတင် မန်ယူ အသင်းကို ဦးဆောင်ဂိုး ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ညာတောင်ပံကနေ ရွန်းနီ ချပေးတဲ့ ဘောလုံးကို ဗန်ပါစီ အပိုင် ပိတ်သွင်းရာမှာ တိုင်ထိပြန်ထွက်လာပြီး လူးဝစ် ရဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ထိပြီး ဂိုးပေါက်ထဲ ၀င်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအစမှာ ကစားပုံကောင်းမွန်နေတဲ့ မန်ယူ အသင်းဟာ ၁၂ မိနစ်မှာလည်း ညာတောင်ပံကနေ ဗလင်စီယာ က မြေရှပ်ဘော ခပ်ပြင်းပြင်း ပို့ ပေးတာကို ဗန်ပါစီ က ညာခြေဖြင့်ပိတ်ကာ ဒုတိယ ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိုးဟာ ဗန်ပါစီ ရဲ့ နေရာယူကောင်းမွန်မှုကြောင့် ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ ဂိုးပေးပြီးချိန်မှာ ချယ်ဆီး အသင်းက ပြန်တိုက်စစ်ဆင်လာပြီး ကွင်းလယ်ကို စီးထားနိုင်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မာတာ၊ အော်စကာနဲ့ဟာဇက်တို့ ရဲ့ တိုက်စစ်ဆင်ပုံဟာ အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး မန်ယူအသင်း မနားတမ်း ဖျက်ထုတ်နေခဲ့ရပါတယ်။ ပထမပိုင်းပြီးခါနီး ၄၄ မိနစ်မှာတော့ ဒီပွဲမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ မာတာက ဖရီးကစ်ကနေ လှလှပပ ကန်သွင်းယူပြီး ချယ်ဆီးအသင်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်ဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း ချယ်ဆီးကပဲ မန်ယူကို ဆက်ဖိကစားပြီး အခွင့်အရေး တော်တော်များများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၅၃ မိနစ် မှာ အော်စကာနဲ့မာတာ တို့ ရဲ့ ဖန်တီးမှုကနေ ရာမီးရက်စ်က ခေါင်းတိုက်သွင်းယူပေးပြီး ချယ်ဆီး အသင်းအတွက် ချေပဂိုး သွင်းယူပေးတာကြောင့် ပွဲဟာ ပိုကြည့်ကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲကို အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး ချယ်ဆီး ကစားသမား ၂ ယောက်ကို ၅ မိနစ်အတွင်း ထုတ်ပယ်ခဲ့တာဟာ ရုပ်ဆိုးစေခဲ့သလို မန်ယူအသင်းရဲ့ လူကျွံဂိုး ကို ခွင့်ပြုခဲ့တာဟာ ပွဲအပြီးမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းရဲ့ အနိုင်ဂိုးကို ချီချာရီတိုက ၇၅ မိနစ်မှာ လူကျွံအနေအထားကနေ သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲအပြီးမှာ ချယ်ဆီးနည်းပြ ဒီမက်တီယိုက “တောရက်စ်ကို ပြခဲ့တဲ့ ဒုတိယ အ၀ါကတ်ဟာ မဖြစ်သင့်သလို ပေးလိုက်ရတဲ့ နောက်ဆုံးဂိုးဟာလည်း လူကျွံဘောပါ။ ဒီလို ပွဲမျိုးဟာ ဒိုင်လူကြီး ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို တွေ့ရတာ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံးဟာ တိုက်စစ်ကို အထူးပြုပြီး ကစားနေခဲ့လို့ ပွဲဟာ ကြည့်ကောင်းနေခဲ့ပေမယ့် ပွဲရဲ့ ရသ ကို ဒိုင်လူကြီးတွေက ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ် ” လို့ မကျေမနပ် ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအပြီး သတင်းအရ ချယ်ဆီး အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက ဒိုင်လူကြီး မာ့ခ်ကလက်တန် ဘတ် အပေါ် စုံစမ်းစစ်းဆေးမှုလုပ်ပေးဖို့ တိုင်ကြားစာ ပို့ ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ချယ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကစားသမား ၂ ယောက် ကို လူမျိုးရေး ခွဲခြားတဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲချက်နဲ့ အတူ တိုင်ကြားစာပို့ ခဲ့တာပါ။
မန်ယူနည်းပြ ဖာဂူဆန် ကတော့ မန်ယူအသင်း ကံ အနည်းငယ် လိုက်ခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့ပြီး ချီချာရီတို ရဲ့ ဂိုးဟာ လူကျွံဘော ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဝန်ခံပါတယ်။ တောရက်စ်ရဲ့ အနီကတ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြောရာမှာ “သူ ဘာကြောင့်လှဲချလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ အီဗန်ကို သူကျော်ဖြတ်ဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးရှိခဲ့ပေမယ့် သူလှဲချခဲ့တာကြောင့် အ၀ါကတ် ထပ်ရခဲ့တာဟာ သူ့ အပြစ်ပါပဲ” လို့ ဆိုပါတယ်။ မန်ယူ အသင်းဟာ လာမယ့် အပတ်မှာ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ထိပ်တိုက်ကန်ရအုံးမှာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပရိသတ်တွေ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ပွဲကောင်းတပွဲ ဖြစ်လာဦးမှာပါ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၉) ရလဒ်များ
မန်စီးတီး ၁-၀ ဆွမ်ဆီး
အာဆင်နယ် ၁ – ၀ ကျူပီအာ
ရီးဒင်း ၃ – ၃ ဖူဟမ်
စတုတ် ၀ – ၀ ဆန်းဒါးလန်း
၀ီဂန် ၂ – ၁ ၀က်ဟမ်း
အက်စတွန်ဗီလာ ၁ – ၁ နောဝစ်
အဲဗာတွန် ၂ – ၂ လစ်ဗာပူး
နယူးကာဆယ် ၂ – ၁ ၀က်ဘရွန်း
ဆောက်သမ်ပတန် ၁ – ၂ တော့တမ်ဟမ်
ချယ်ဆီး ၂ – ၃ မန်ယူ
မြန်မာလူငယ်အသင်းနဲ့ အာရှ အသက် ၂၂ အောက် ခြေစစ်ပွဲ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment nay san thu October 30, 2012 - 6:10 am	Man U played with 12 men while Chelse are 9. I’m Man U fans but I’m feeling bad till today for the referee’s decisions.
Reply	Chelsea fan October 30, 2012 - 10:38 am	ဒိုင်လူကြီးတွေက မန်ယူမနိုင်ရင်မဖြစ်အောင် မန်ယူဘက်ကိုဘက်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးနေတာ အခုတစ်ပွဲမှ မဟုတ် တော့ပါဘူး ။ ယမာန်နှစ်တွေ ၊ ယခင်ပွဲတွေတုံးကလည်းဘဲ မန်ယူကို ဘက်လိုက်ပြီး အနိုင်ပေးခဲ့တာတွေ အများ ကြီးပါဘဲ ။ မန်ယူဆိုတာ အင်္ဂလန်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အသင်းလို့ သူတို့ သတ်မှတ်ထားလို့ပါ ။ မနှစ်ကလည်း အက်ရှလီယန်း ဒိုင်ဗိုင်ထိုးမှန်းသိရဲ့သားနဲ့ ပယ်နယ်တီတွေပေးပြီး အနိုင်ပွဲတွေရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် ။ မနှစ်က ချယ်လ်ဆီး-မန်ယူပွဲမှာလည်း မန်ယူဘက်ကို ပယ်နယ်တီနှစ်လုံးသတ်မှတ်ပေးပြီး ၃ ဂိုးစီသရေကျအောင်လုပ်ပေးခဲ့ တယ် ။ အခုလည်းဘဲ ဆက်ကစားရင် မန်ယူရှုံးတော့မယ်ဆိုတာသိလို့ သက်သက်မဲ့ ချယ်လ်ဆီးကစားသမား ၂ ယောက်ကို ထုတ်ပစ်တာပါ ။ ဒါတောင်မနိုင်သေးလို့ လူကျွံသွင်းသွားတဲ့ဂိုးကို ဂိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါ ။ အင်္ဂလန်ဒိုင်လူကြီးတွေဟာ မန်ယူဘက်တော်သားတွေပါ ။ ဒါကြောင့် မန်ယူအသင်းကို ဘယ်တော့မှ အားပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ တောရက်စ်ဟာ ဟန်ဆောင်လှဲချတာမဟုတ်ပါဘူး ဖာဂူဆန် ။
Reply	khinmglay October 31, 2012 - 8:45 am	ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချယ်ဆီးမန်ယူပွဲမှာ ချယ်ဆီးက ၃ ဂိုးပြတ်နိုင်နေချိန် မန်ယူကိုပယ်နတီ ၂ ဂိုးပေးလိုက်တာ ဒီနှစ် ၂-၂ သရေကျပြီး ချယ်ဆီးက နိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေချိန်မှာ ရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းက အဓိကလူနှစ်ယောက်ကို ထုတ်ပစ်တာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ အဆင့်အတန်းတစ်ခုတော့နိမ့်ကျသွား သလိုပဲ FA ကိုလွှမ်းမိုးနေတာ ၀ါရင့်နည်းပြကြီးလား ဒိုင်တွေအားလုံးသူ့သြဇာက မလွန်ဆန်နိုင်သလိုပဲ သေချာပါတယ် လာမယ့် အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲ မှာလည်း နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အနီကပ်တွေ ပယ်နတီတွေ ဧရယာအနီးပစ်ဒဏ်ဘောတွေနဲ့ မန်ယူပဲ အနိုင်ရသွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း
Reply	khinmglay October 31, 2012 - 8:47 am	FA = ဖာဂူဆန် အသင်း ဒါဆိုသိကြတယ်နော်
Reply	ုkyaw swar October 31, 2012 - 11:06 pm	မန်ယူဟာတစ်ယောက်ထုတ်နဲ့ကန်ရင်မနိုင်ပါဘူးဒိုင်ကြောင့်သာအနိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့၁၃ယောက်၉ယောက်ကန်ရတာပါပဲ။
Reply	truth seeker November 1, 2012 - 5:56 pm	chelsea player2yout lout mha ma htote yin manu bal lo kan kan ma naing buu so tar tay char lo. dinelugyii so tae lu ka yote mhar tar athi thar gyii par
chelsea shown lae manu ko ahtin kyiii sa yar ma shi par
lone wa lae ma kyite par
chelsea bal lout shown shown nout sone tann sinn zone ma ka lo. football law ka ka nay apee kwal pyout twar mal so yin tg mha chelsea ko favourite aphit sone par
ag myin mhu twe amyar gyii ya par say chelsea !